Muwaadin Somali Canadian laga sii daayey Ethiopia oo ku baaqay Baaritaanka Xarigiisa sharci-darradda. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Muwaadin Somali Canadian laga sii daayey Ethiopia oo ku baaqay Baaritaanka Xarigiisa sharci-darradda.
Bashiir Makhtal Daahir oo in ka badan 11-sanno ku xirnaa Xabsi ku yaalla Ethiopia waxa uu hadalkaasi shalay ka hor sheegay Barlamaanka Kanada, isagoo faahfaahin ka bixiyey xaalladihii adkaa ee uu kala kulmay Xabsiga.
Waxa uu tilmaamay inuu rumeysnaa inuu ku dhex geeriyoon doono Xabsiga Dhexe ee Addis Abeba.
Waxa uu ugu baaqay Dowladda Federalka Kanada inay baaritaan ku sameeyeen Kiiskiisa, wuxuuna sheegay inuu si xaq-darro ah ugu xirnaa Ethiopia in ka baadan 11-sanno.
Muwaadinkaasi oo Xabsiga Ethiopia laga sii daayey bishii hore ee April waxa u uku eedeeyey qeybta Adeegga Qunsulliyadda Kanada inay ka gaabiyeen sidii ay isaga Aadmi ahaan ugu kaalmeyn lahaayeen, ugana qeyb geli lahaayeen Sii-dayntiisa.
Bashiir Makhtal Daahir oo 49-jir ah waxa uu Barlamaanka Kanada ka hor sheegay inuusan Dowladda Kanada ka helin taageero xilligii uu u baahnaa, wuxuuna ku calaacalay inuu rajeynayey inuu ku dhinto Xabsiga Ethiopia.
Bashiir Makhtal oo ku dhashay dalka Ethiopia, isagoo 7 jir ahna yimid Somalia waxa lagu qabtay Kenya sannadkii 2006-dii, waxaana loo gudbiyey Ethiopia, iyadoo sannadkii 2009-kii lagu soo oogay inuu xubin ka yahay Jabhadda Xoreynta ee ONLF.
Sidoo kale, Bashiir Makhtal oo shalay la hadlay Suxufiyiinta waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu la midoobo Qoyskiisa iyo inay mar kale dib u bilaabaan Noloshooda.
Xaaskiisa oo lagu magacaabo Casiisa Cabdi waxay iyadana sheegtay inay ku faraxsan tahay inay mar kale dib u bilaabeen Nolosha Qoyskooda, iyadoo Xariga Saygeeda ku tilmaamtay inay ku waayeen qeyb ka mid ah Noloshooda.
Rag bustoolado ku hubeysnaa oo lagu toogtay Muqdisho
Dukumenti sir ah oo laga xaday Ciiddanka Badda ee Yuhuudda.